UTom Howard - Khulisa ibhizinisi lakho leCannabis noMmeli wethu weCannabis
Mayelana noTom - Ummeli Wezimboni zeCannabis
Umdabu wasePeoria, e-Illinois, Thomas Howard uthweswe iziqu e-Illinois Wesleyan University naseMarquette University Law School.
Kuwo wonke lo mkhakha wakhe, uthole imiklomelo yama-dollar ayizigidi eziningi, wagcizelela izinqumo, futhi wavikela namalungelo amaklayenti wakhe ngenkathi eluleka ngokuthi sinciphise kanjani isikhathi nezindleko ezenziwayo ekuqinisekiseni izinkontileka ngokufaka icala.
Usebenza eMkhandlwini Wokuhweba Ngezimali wase-Illinois State Bar Association, Immigration and Cannabis Section Cards futhi unikezwe bobabili njenge Rising Star by Super Lawyers futhi njengoMmeli Oqhamuka Ngabameli Bokuhola kusukela ngo-2015.
Kuwo wonke umkhuba wakhe, ubengusomabhizinisi ogxile ekwakheni inzuzo.
Ngo-2013, uTom wayefuna ukuvuza abantu ngokuthenga a inoveli ayibhala ngo-2010 ngemithetho yensangu futhi weza nombono wohlelo lokuvikelwa kwezepolitiki. Yena notshalomali bakhe i-LLC futhi bakhe uhlelo lokusebenza lokuvikela ezepolitiki, Ama-callitics
Waqala ukuzifundisa ukubhala amakhodi nokuthi isoftware ne-inthanethi isebenza kanjani. Usebenze futhi wasebenzisana namaqembu emhlabeni wonke jikelele, wenza inethiwekhi yabathuthukisi athembekile abangathembela kubo kumakhi wezakhiwo nezixazululo zesoftware ngokwezifiso zamapulatifomu, ngaphezu kwezentengiso ezibaluleke kakhulu zokumaketha nokwakha wonke amabhizinisi anokubakhona kwe-inthanethi okudingayo.
Ngemuva kokubamba iqhaza nokufunda isoftware nebhizinisi lewebhu iminyaka eminingana, uTom Howard wasungula inkampani ye-tech egama linguStage ukuze isize ekwakheni izinto, njengalesi siza, nezinye izinto ezakhiwayo software.
Ngentwasahlobo yango-2016, uTom Howard wayefuna ukuqala ukusebenzisa ulwazi lwe-software yakhe ngomkhuba wakhe wezomthetho. Isicelo se-visa se-H-1B safika sathola ideski lakhe futhi yayazi ukuthi singakwazi ukufakwa kumakhodi ngenxa yohlobo lwedatha nobuningi bezicelo ezidinga ukuma okujwayelekile.
Wenze ucwaningo ukuthola ubungako bemakethe kanye nesidingo sezisombululo ezisekelwa kuwebhu ukuhlehlisa inqubo amabhizinisi abhekana nayo lapho izama ukuqasha ithalente lamakhono obuchwepheshe emhlabeni.
Ngemininingwane ekhona, uTom Howard wabuyela emaqenjini abewakhile noStumari futhi waqala ukuklama isixazululo esisha sezinkinga zokufudukela kwamanye amazwe. Akumelwe nje kuphela ukuthi ama-visa ahambisane nemithetho eshintshashintshayo evela kumaSiko namaSiko okuThuthela kanye noMongameli wamanje, kodwa-ke isimo se-visa kufanele siphathwe ngaso sonke isikhathi.
Ukuthuthuka kuyaqhubeka kuze kube namuhla futhi kusiza abantu babone Amaphupho abo aseMelika.
Vakashela ama-visa ama-Work
Ummeli Wezimboni zeCannabis
Ngesikhathi sokuphumula kwakhe eminyakeni yokuqala embalwa yokusebenza komthetho, uTom Howard wacwaninga ngomlando nangomthetho wamacala mayelana nokuqina kwemithetho yensangu yesizwe. Ishicilele le noveli ephuma ocwaningweni olwenziwe ngaphansi kwe-pseudonym yakhe, uHoam Rogh. Njengoba ayekade eshicilele ezinye izincwadi ezimbili azibhala ngesikhathi sakhe sokugcina esikoleni sezomthetho.
Ukusuka lapho, uTom Howard wakhulisa lolu cwaningo ezindaweni eziyinkimbinkimbi zomthetho wamasheya futhi waqala ukushicilela nokukhuluma ngezinkinga ezahlukahlukene ezihlobene nomkhakha we-cannabis osafufusa. Njengommeli wasePeoria, e-Illinois, umkhuba wakhe e-cannabis ukhawulelwe kuze kube ngu-2018, lapho eqala isiteshi se-YouTube kuso futhi umbuso waqala imashi ebheke emthethweni ngokusetshenziswa kwabadala.
Usengathola ikhophi yencwadi ayibhalayo, kepha eyashicilelwa ngaphansi kwesihloko esinyantisayo, e-Amazon.
Ngo-2018, uTom Howard wayesekwenze ukubonwa kwemalimboleko engaphezu kwe-100 yezentengiselwano futhi wabona ukubekelwa imali okwanele kwebhange ukubona amaphethini alo ngokujulile.
Ubuye wahlala phezu kwezitayela emkhakheni wezomthetho futhi waqala ukubona ukusebenzisana kwamakhono akhe wetechnology and bank litigation sets.
Ngenxa yalokhu, wethula i-Collateral Base njengomthombo wamabhange wezohwebo futhi waqokomisa ukuvela okuqhubekayo kokuthengiselana okuvikelekile kanye nomthetho wezikhungo zezimali.
UTom Howard uxubanisa isoftware yakhe namakhono asemthethweni okuhlinzeka ngemali ekhokhwayo yokufaka izimangalo ngebhange lezentengiselwano, futhi asebenzise imininingwane evela kulowo mkhuba ukuze aqhubeke enza futhi acwenge insiza enikeza amakhasimende akhe ebhange lomphakathi.
Ummeli weCannabis ku-Social Media
UTom Howard wenze ucwaningo ngenkuthalo futhi wakhonza i izidingo zomthetho we-cannabis zomthetho kusukela ngo-2010. Ubeshicilele kaningi ezindabeni ezahlukahlukene imboni ebhekene nazo imboni futhi iveze izikhungo zezezimali neze-cannabis embonini entsha neyinkimbinkimbi. Ngo-2018, uTom Howard waqala a Isiteshi se-YouTube futhi wethula le webhusayithi ukukhulisa amandla akhe okuxhumana futhi wakhonza imboni ye-cannabis.
Ngesikhathi sokuphumula kwakhe eminyakeni yokuqala embalwa yokusebenza komthetho, uTom Howard wacwaninga ngomlando nangomthetho wamacala mayelana nokuqina kwemithetho yensangu yesizwe. Ishicilele le noveli ephuma ocwaningweni olwenziwe ngaphansi kwegama lakhe lokuziphatha, uHoam Rogh. Njengoba ayekade eshicilele ezinye izincwadi ezimbili azibhala ngesikhathi sakhe sokugcina esikoleni sezomthetho.
Ngemininingwane ekhona, uTom Howard wabuyela emaqenjini abewakhile noStumari futhi waqala ukuklama isixazululo esisha sezinkinga zokufudukela kwamanye amazwe. Akumelwe nje kuphela ukuthi ama-visa ahambisane nemithetho eshintshayo evela Kwamasiko Wezifiso Nokwezokufika kanye noMongameli wamanje, kodwa-ke isimo somgcini we-visa kufanele siphethwe ukuze ngaso sonke isikhathi sihambisane.